Talo: Sida Loo Helo Sawirro Muuqaallo la mid ah Boggaaga Sawirka ee Hantida ah oo leh Raadinta Sawirka Google | Martech Zone
Jimco, Diisambar 11, 2020 Jimco, Diisambar 11, 2020 Douglas Karr
Ururadu badanaa way istcimaalaan feylasha kuwaas oo shati haysta oo laga heli karo goobaha sawirada lagu keydiyo. Caqabadu waxay timaaddaa markay rabaan inay cusboonaysiiyaan dammaanad kale oo urur gudahood ah si ay ula jaanqaadaan qaabaynta iyo sumcadda la xiriirta astaamaha ama astaamaha horay loo sii daayay.
Waqtiyada qaarkood, tani waxay ku imaan kartaa isbeddelka sidoo kale… mararka qaarkood naqshadeeyayaasha cusub ama ilaha wakaaladda waxay la wareegaan nuxurka iyo dadaalka naqshadeynta urur. Tani dhowaan ayey nala dhacday markii aan la wareegnay la shaqeynta shirkad oo aan ka caawineyno sameynta waxyaabaha.
Isticmaal Raadinta Sawirka Google si aad uga Hesho Vectors la mid ah Goob Sawir Sawir ah
Trick waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago qof walba waa in la isticmaalo raadinta Sawirka Google. Raadinta sawirka Google waxay kuu suurta gelinaysaa inaad sawir soo dhigto oo aad kaga jawaabto sawirro la mid ah shabakadda oo dhan. Hal toobiye, in kastoo, aad run ahaantii raadin karto goob gaar ah… sida goob sawir sawir leh.
Waxaan ahaa gacansaar iyo macaamiil waqti dheer ah Depositphotos. Waxay leeyihiin xulashooyin cajiib ah oo sawirro ah, feylalka vektorka (EPS), iyo fiidiyowyo kujira boggooda oo ay kujiraan qiime iyo liisan gaar ah. Waa tan sida aan ugu istcimaalo Raadinta Sawirka Google si aan uga helo vektaro dheeri ah oo boggooda ku habboon isla qaabeynta.
Tusaalaha kor ku xusan, waxaan u baahanahay inaan u dhoofiyo muuqaalkeyga vector-ka qaabka png ama jpg si aan ugu soo raro Raadinta Sawirka Google:
Sida loo Raadinayo Goob Sawir Sawireed loogu talagalay Vectors la mid ah
Tallaabada ugu horreysa waa in la isticmaalo Raadinta Sawirka Google. Xiriiriyaha tan wuxuu ku yaal geeska kore ee midig ee bogga guriga ee Google.
Raadinta Sawirka Google waxay bixisaa ah geliyaan astaanta halka aad ku shuban karto sawirka tusaalaha ah ee aad rabto inaad raadiso.
Raadinta Sawirka Google waxay ku siineysaa astaanta soo dejinta halka aad ku shuban karto sawirka tusaalaha ah ee aad rabto inaad raadiso. Waxa kale oo jira ikhtiyaar lagu dhejiyo URL sawir haddii aad ogtahay halka sawirku ku yaal boggaaga.
Hadda Bogga Natiijooyinka Raadinta Sawirka Google bixin doonaa sawirka. Waxa kale oo ku jiri kara ereyada metadata ee ku lifaaqan galka sawirka.
Halkan waa halka ay khiyaanadu tahay is waxaad ku dari kartaa a baadi goob si kaliya looga dhex raadsado hal degel iyadoo la adeegsanayo isku xidhka soo socda:
Ikhtiyaar ahaan, waxaad sidoo kale ku dari kartaa ereyo kale haddii aad jeceshahay, laakiin sida caadiga ah ma sameeyo markii aan raadinayo vector si aan u helo dhammaan maktabadaha vectors la mid ah si aan u soo dejiyo oo u isticmaalo.
The Bogga Natiijooyinka Raadinta Sawirka Google waxay la imaaneysaa xulasho natiijooyin la mid ah sawirka asalka ah. Waxaad badanaa ka heli kartaa vector asalka natiijooyinka sidoo kale!
Hadda waan daalacan karaa Depositphotos natiijooyinkaan, ka hel sawirrada ama maktabadaha la midka ah, oo u adeegso naqshadaha dheeraadka ah ee aan u abuureyno macmiilka!
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyaha ku xiran Depositphotos ee maqaalkani.
Tags: brandingekspertensawiroepsraadinta sawirka googleHalbeegga raadinta googlesawirqaadegoobta raadintagoobta raadintasawirka saamigavectors kaydkafeylasha